Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka » Dabaysha Dabaysha Ida oo ku socota Wadada New Orleans
Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Dhulkii burburinayey ee Hurricane Ida ayaa maanta ku dhow Koonfurta Louisiana, oo u dhow New Orleans ee Maraykanka.
Duufaan bahalnimo ah, oo laga yaabo inay tahay tii ugu xoogga badnayd muddo 150 sano ah ayaa laga yaabaa inay u kacdo dabaylaha qaybta 5, iyo in lagu qabsado duufaankani ma aha mid la badbaadin karo.
Duufaanta Ida ayaa ka yar Duufaanta 5 Storm oo la filayo inay ku dhufato Xeebta Koonfur Bari Louisiane iyo Kentucky, USA abbaare 2 -da duhurnimo ee xilliga maxalliga ah. Saameynta ugu daran ayaa la filayaa inay qiyaastii 50 mayl u jirto New Orleans.
Tani waxay noqon kartaa duufaantii ugu xoogga badnayd ee laga diiwaan geliyo Maraykanka in ka badan 150 sano
Dadka aan ka soo guurin waa inay ka warqabaan mawjadaha badweynta ee 15ft, tornados marka lagu daro 150+ mph dabaylaha duufaanta
5tii subaxnimo ee xilliga maxalliga ah, duufaanta ayaa weli sii xoogaysanaysay.
Dhammaan cutubyada ilaalada qaranka ayaa heegan ugu jira inay caawiyaan marka duufaanku dhaafo.
Isbitaallada ayaa had iyo jeer awood ahaan u shaqeynaya sababtuna tahay koror aad u weyn oo COVID-19 ah.
Waqtigan xaadirka ah, xawaaraha dabayshu waa 150 mph, kaliya 7 mayl ayaa ka yar duufaanta qaybta 5.
Af -hayeennada warshadaha hoteelka ee New Orleans ayaa sheegay in hoteellada loo diyaariyay inay ilaaliyaan martida.
Huteelo badan ayaa lagu iibiyey Arkansas, Texas, Louisiana oo martida Koonfurta Louisiana ay isku dayayaan inay ka baxsadaan duufaanta Ida.
Tani waa muuqaal uusan qofna doonayn inuu ku arko dayax -gacmeedka. Ida, oo ah Duufaan weyn oo Qaybta 4 ah oo leh dabaylo joogto ah oo joogto ah oo hadda ah 145mph ayaa sii wadata inay u soo dhowaato koonfur -bari Louisiana. Tani weli waa xaalad halis ah, oo nafta halis gelinaysa. La soco wixii soo kordha. #sharci #mswx pic.twitter.com/SMs227S3CH
Duufaanta ayaa la filayaa inay si toos ah ugu gudubto qaar ka mid ah warshadaha kiimikada. Tani weligeed ma dhicin waana welwel sida ay qabaan khubaradu.
Macluumaadkan waa laga bilaabo 6 subaxnimo waqtiga maxaliga ah:
Duufaantii Ida Tropical Cyclone Update NWS National Hurricane Center Miami FL AL092021 600 AM CDT Sun Agoosto 29 2021 ... NOAA PLANE FINDS IDA STRONGER ... ... KOOXDA HALISTA BADAN 4 IDA HURRICANE OO LA FILAN YAHAY INUU KA DHIGO WAQTIGA KOONFUR GALBEEDKA LOUISI . Wararka ka imanaya diyaarad NOAA Hurricane Hunter ah ayaa tilmaamaysa in dabaylaha joogtada ah ee ugu badan ay kor u kaceen oo ku dhowaadeen 150 mph (240 km/h) oo leh dabaylo sare. Cadaadiska dhexe ee ugu yar ee ugu yar oo lagu qiyaasay xogta diyaaradda sahanka waa 935 mb (27.61 in). Saldhigga NOAA C-MAN ee Pilot's Station East oo u dhow Southwest Pass, Louisiana, ayaa dhowaan soo wariyay dabayl joogto ah oo ah 82 mph (131 km/h) iyo jajab ilaa 107 mph (172 km/h). Xarun kale oo NOAA oo sare u kacday C-MAN oo ku taal Southwest Pass ayaa dhowaan soo warisay dabayl joogto ah oo 77 mph (124 km/h) iyo dabayl ah 93 mph (150 km/h). KOOBAN 600 AM CDT ... 1100 UTC ... MACLUUMAAD ------------------------------------ ---------- GOOBTA ... 28.3N 89.4W KU SAABSAN 75 MI ... 120 KM SSE GRAND ISLE LOUISIANA Qiyaastii 60 MAY ... 95 KM SSW AFKA Wabiga WISISISPI ... 150 MPH ... 240 KM/H Dhaqdhaqaaqa Joogtada ah ... NW AMA 315 DEGREES 15 MPH ... 24 KM/H DHAQANKA DHEXDHEXA ... 935 MB ... 27.61 INCHES